SUNNY Thadingyut Lucky Draw Promotion - FAQs & Terms and Conditions – SUNNY eSTORE
SUNNY Thadingyut Lucky Draw Promotion - FAQs & Terms and Conditions
သီတင်းကျွတ်လက်ဆောင် Lucky Draw အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ရဲ့ သတ်မှတ်ကာလက ဘယ်အထိလဲ။
သီတင်းကျွတ်လက်ဆောင် Lucky Draw အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁ရက်နေ့မှ၃၁ရက်နေ့အထိသတ်မှတ်ထားပါသည်။
What is the promotion period for this Thadingyut Lucky Draw Promotion?
This Thadingyut Lucky Draw Promotion period is from 1stto 31st October 2020.
အခြားဖော်ပြထားချက်များ မရှိပါက SUNNY eSTORE ၏ ဝယ်ယူသူအားလုံးသည် သီတင်းကျွတ်လက်ဆောင် Lucky Draw အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
All SUNNY eSTORE’s customers are eligible to participate in this Promotion, unless otherwise specified.
ကျွန်ုပ်တို့၏ website ဖြစ်သည့် www.sunny.com.mm မှပစ္စည်းများကို တိုက်ရိုက်မှာယူခြင်းဖြင့် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ နံနက် ၇ နာရီမှာ ည ၁၀ နာရီအတွင်း ၀၉ ၈၉၁ ၇၄၉၄၈၉ ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏customer service hotlineသို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ Facebook messenger chat မှဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
You can participate by ordering the directly from our website www.sunny.com.mm
Alternatively, you can also call our customer service hotline at 09 891 749489 between 7AM – 10PM to place your order, or simply drop usanote on our Facebook messenger chat before 10PM everyday.
‌သင်၏ဝယ်ယူမှုကို နည်းလမ်း ၂ မျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည် - (၁) KBZPayကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ၏ကုန်သည်ငွေစာရင်း (စာရင်းနံပါတ် - ၇၀၀၀၁၉၀၁) ထံ ငွေလွှဲပြီး ပေးချေနိုင်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် (၂) သင့်တံခါးဝသို့ ပစ္စည်းများ ရောက်သည့်အခါတွင် Cash on Delivery အား အသုံးပြုရုံဖြင့် ပေးချေ နိုင်ပါသည်။
KBZPay app မှတစ်ဆင့် သင် ပေးချေမှုပြုလုပ်ပြီးသည့်အခါတွင် Customer Service Hotline မှတစ်ဆင့်၊ သို့မဟုတ် Facebook messenger ပေါ်မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ Customer Service Team ထံကျေးဇူးပြု၍ အသိပေးပါ။
You can make your purchase via two different methods: (i) by using KBZPay and transferring to our merchant account (account number: 70001901) or simply by using (ii) Cash on Deliverywhen the products arrive at your doorstep!
အခြားဖော်ပြချက်များ မရှိပါက အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကာလအတွင်း သင် မှာယူနိုင်သည့်အရေအတွက်မှာ ပစ္စည်း stock လက်ကျန်ရှိနေသည့်အထိ မည်သည့်အကန့်အသတ်မှ မရှိပါ။
အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်အတွက် ပစ္စည်းပို့သည့်မူဝါဒမှာ SUNNY eSTORE ၏ အထွေထွေပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးမူဝါဒနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအစီအစဉ်အတွက် ပစ္စည်းတွင် မူလ/ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက် များရှိသည့်အခါမှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ပစ္စည်း(များ) ပို့ပြီးသည့်အခါတွင် အမှာများအား ဖျက်သိမ်းခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။
သီတင်းကျွတ်လက်ဆောင် Lucky Draw အစီအစဉ်အတွက် ငွေပြန်အမ်းယူခြင်းများကို ခွင့်မပြုပါ။
Refunds are not allowed for Thadingyut Luck Draw Special Promotion.
ကံစမ်းမဲကူပွန်စုစုပေါင်း ၃၀၀ ခု ပြည့်မီပြီးသည့်အခါ ကံစမ်းမဲသတ်မှတ်ကာလအပြီးတွင် ကျပ် ၃သိန်းတန်အထူးဆုတစ်ဆုနှင့်ကျပ် ၅သောင်းတန် ဆု ဆယ်ဆုကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ မဲနှိုက်ရွေးချယ်၍ပေးအပ်သွားမည့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
SUNNY eSTORE တွင် အသုံးပြုမှုအားလုံးကို အကျုံးဝင်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအားကြည့်ရှုရန်အတွက် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
The lucky draw will proceed only whenatotal 300 worth of coupons purchased, at the end of promotion period. After the promotion period, SUNNY eSTORE will organizealuck draw to awardagrand prize worth of 300,000 Kyats worth vouchers and ten 50,000 Kyats worth vouchers.
Please click here to access otherTerms & Conditions that apply to all usage on the SUNNY eSTORE.